I-WOWOW Best Donsela phansi Isikhephe Sekhishi Sine-Magnet Chrome
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela phansi Izicucu / WOWOW Best Donsela phansi Umpompi Wekhishi Nge-Magnet Chrome
Kulinganiselwe ngo- 5.00 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 10 izilinganiso ikhasimende
(10 Izibuyekezo ikhasimende)
2311901C imiyalo yokufaka
Ikhishi isitofu esisodwa isibambo 2311901C
Ukhathele ngokufinyelela okulinganiselwe kwesikebhe sakho sasekhishini esisodwa? Unganqikazi, futhi masinyane uthenge isibambo setouch ekhishini seWOWOW. Ngesipikili esisodwa isibambo seWOWOW unganweba ibanga lakho kalula, futhi uzokwazi ukufinyelela kunoma iyiphi indawo ngaphakathi noma ezungeze ikhishi lakho elisinki. Ikakhulu uma ikhishi lakho lifakwe echibini elisinki eliphindwe kabili, isitofu esisodwa sasekhishini seWWOW siza kahle kakhulu. Ngekhanda lesifutho esiguquguqukayo esingu-360 degrees, unokuguquguquka okuphezulu okufunayo. Ngeke kube khona indawo eshiywe ongeke wayifinyelela ngesibambo sokuphekela ekhishini seWOWOW.
Ngokudonswa ngamandla kukazibuthe, ungahlwitha kalula isifutho sekhishini kuzibuthe ezinamandla. Ngale ndlela i-sprayer ekhishini lakho izohlala isendaweni futhi ayihlali isikhathi njengasiphi esinye isikebhe ekhishini. Isipikili esisodwa sekhishini seWOWOW asisoze sikudumaze. Lokhu kusebenza okusha kuzogwema ikhanda lekhompiyutha yakho ekuweni noma ekuweni yinhliziyo yonke. Isici semagneti sekhishini faucet yesibambo esisodwa se-ihlolwe izikhathi ezingaphezu kuka-10,000. Uzibuthe owakhelwe ngaphakathi wakwazi ukumelana nazo zonke lezi zivivinyo, futhi ngemuva kwezikhathi ezingama-10,000 wakwazi ukulungisa ikhanda lekhanda kahle nangempela ngemuva kokulikhipha. Uqinisekiswa ngekhwalithi eqinile ezokwenza kahle ezindlini nasemakhaya.
Ikhishi isitofu esisodwa isibambo esinemisebenzi ehlukahlukene
Isipikili esisodwa ekhishini se-WOWOW ngaphandle sikunikeza imisebenzi ehlukahlukene. Ngemisebenzi emithathu yamanzi ungakhetha umsebenzi othile wamanzi okusebenzela kahle kakhulu emsebenzini wasekhishini owenzayo. Ungawukhetha kahle umsebenzi owudingayo ngenkinobho ekhanda lokufafaza lesibambo sokuphekela sasekhishini esisodwa. Ungakhethela imodi ejwayelekile yokusakaza ukugcwalisa izimbiza zakho ngamanzi, noma imodi yokufafaza ukuhlanza imifino yakho. Imodi ehlukile ye-aqua-blade ifaka amandla amakhulu okuhlanza izitsha zakho ezingcolile nekhishi lishone ngokushesha nangokuphumelelayo.
Ukuze ukhuphule ugesi kumanani wakho wamanzi, abahlanganisi be-Neoperl ABS basindisa cishe u-50% wamanzi. Ngeke nje uqaphele umthamo wamanzi oncishisiwe ngenxa yalesi sici esisha. Kepha okungenani ungaqiniseka ukuthi awusebenzisi amanzi. I-aerator ingasuswa kalula ngohlamvu lwemali ukuhlanza le ngxenye yesuphu ekhishini, noma ukuyifaka esikhundleni sayo. Isipikili esisodwa sesibambo sekhishi sizosebenza kahle ngaphandle kwe-Neoperl ABS aerator, ngakho-ke uma ungaqiniseki ukuyisebenzisa, ungamane usisuse ekhishini lakho elilodwa isikebhe sefenisha.
Isibambo esisodwa esisezingeni eliphezulu ekhishini
Izinga olithola ngemali yakho lihlaba umxhwele. Iningi lamakhasimende belingalindele ikhwalithi ehlobene nentengo yalesi sibambo setouch ekhishini. Ngakho-ke singasho ngokweqiniso ngaphandle kokuqhosha ukuthi ikhishi lepucet isibambo esisodwa sikunikeza inani elingcono kakhulu lemali ongayithola emakethe. Ngokushesha uqaphela ikhwalithi yalesi sikhwanyana esisodwa esiphephesi lapho usibambile. Ubunzima besikebhe ekhishini sembula insimbi eqinile eyenziwe ngayo.
Umzimba wepayipi lasekhishini wenziwe nge-alloy zinc ukuqinisekisa ukuqina okude, kanye nomgogodla wasekhishini owenziwe ngethusi. Ngaphandle kwalokho, isipuni sepompo lasekhishini senziwe ngensimbi engagqwali ukukunikeza ithuluzi lasekhishini elingenathonsi futhi elinomthofu. Ipayipi lokukhipha lenziwe ngezinto eziqinile zokulwa nokuqhuma, kanti olayini bamanzi base-tucai - abanomshuwalense womhlaba wonke - bafaka ingxenyeni yensimbi engagqwali. Akusizi ngalutho i-WOWOW inamakhasimende amaningi omhlaba ahlala amakhasimende athembekile unomphela, ngoba azobuya ethenga ompompi basekhishini be-WOWOW ngokulungiswa kabusha kwekhishi kwabo okulandelayo.
Kokubamba okulula ukufakwa kwekhishi isibambo esisodwa
Uma ukhetha isibambo esisodwa ekhishini sokuhlanganisa nekhishi lakho elisanda kuklanywa, ezikhathini eziningi singafakwa umzuzu nomfakeli wasekhishini lakho ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Kodwa-ke, uma ufuna ukukhulisa ikhishi lakho ngaleli pheki lasekhishini elilodwa, abanye abantu bayazivumela ukuthi zimiswe njengoba belindele ukuthi kuzobizwa ipayipi elibizayo ukufaka lo mshini wokuphelisa isibambo esisodwa ekhishini. Kodwa-ke, i-WOWOW yenze kwaba lula ukuthi ifake lesi isibambo esisodwa sekhishi elilodwa ukuze ukwazi ukuzenzela ngokwakho. Bekungeke kudingeke ukuthi uqashe ipayipi elibizayo futhi ngemizuzu engama-30 nje kuphela ungaguqula isikebhe sakho sasekhishini esidala ngaleli pheki lesitsha sekhishini esisodwa seWOWOW.
Abathengi bayamangala ngenxa yokulula kokufaka lesi isibambo esisodwa ekhishini. I-WOWOW ikwazile ukwenza ukufakwa okulula, ngendlela yokuthi noma ngubani angakwazi ukufaka leli khishi isibambo esisodwa isibambo ngemizuzu nje engama-30. Isikebhe ekhishini senziwa ngendlela ehluke kakhulu kunoma iyiphi enye isikebhe ekhishini. Kuyavela ukuthi zonke izinto zokufaka zifakiwe ngalesi sibambo esisodwa sepheki ekhishini.
Isipikili esisodwa esisebenza ngendleko ekhishini
Isipikili esisodwa ekhishini se-WOWOW ifakwe i-escutcheon yokuzikhethela yokufaka ukufakwa kwe-1- noma i-3-hole. Ngale ndlela ngeke ushiywe nanoma yiziphi izimbobo ezimbi ekhompyutheni yakho yasekhishini ngemuva kokuyifaka. Konke kuzofakwa ngokuhlanganiswa ukuze kukunikeze ama-esthetics afanele okufanele. Ukufaka isibambo esisodwa ekhishini ekhishini lakho, kufakwa ikhithi yokufaka nomkhiqizo wakho, futhi nevidiyo yokufaka, ukufakwa kuzokwenziwa ngombala wamehlo.
Njengoba isibambo sokuphephela ekhishini seWOWOW sikunikeza ikhwalithi engabizi futhi ukubukeka kwesimanje, uthole isibambo sekhishi esisodwa ekhishini owawufuna. Lesi isibambo esisodwa sekhishini isibambo esisodwa siyisilinganiso esihle semali oyothola emakethe. Ngesiqinisekiso seminyaka engu-5 nesikhathi sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90 ungathenga isikebhe esisodwa sasekhishini seWOWOW ngaphandle kwengozi. Ngakho-ke ulindeni?
Izinzuzo ekhishini isikulufu esisodwa isibambo esisodwa ngamafuphi:
· Magnetic ukudonsa ikhanda lokufafaza
Ama-degrees angama-360 afinyelela
· Ukusebenza okuphezulu
· Kwenziwe ngezinsimbi eziqinile zekhwalithi ephezulu
SKU: 2311901C Categories: Ikhishi Faucets, Donsela phansi Izicucu Tags: Ikhishi Sink Faucets, Spot Ukumelana Stainless, Insimbi engagqwali
21.7 x 11.2 x amasentimitha angu-2.8
M *** n2020-07-08
Ngikuthengile lokhu ukufaka esikhundleni sompompi wethu obizayo weMoen lapho inkinobho yesifutho ifafazwe khona futhi ibukeka kabi. Lokhu kungumklamo olula ngempela ngenani lentengo. Mude kancanyana kunompompi wethu okhona, engicabanga ukuthi uzokwenza kube lula ukugeza amabhodwe amakhulu kanye namadilowa esiqandisi. Iza ihlanganiswe kahle futhi ngilinde nje umphathi wami ukuthi eze azoyifaka vele. Ngifunde izibuyekezo futhi bathi kulula ukuyifaka ngakho-ke ngilingeka ukuba ngiyifakele ngokwami ​​kwazise ungibambezele izinyanga! Ngizobika uma sekufakiwe.
Vuselela! Lokhu kufakiwe nje futhi NGIYAKUTHANDA. Kulula ukuyisebenzisa futhi inengcindezi enhle kakhulu yamanzi. Ukufakwa kwakulula kunokukhishwa kompompi wakudala. Isifutho sihlala ngaphandle uma usicisha okuyisici esibalulekile ompompi bakwaMoen ababengenaso. Iphinde ihlehle kalula futhi kulula kakhulu ukuyihlanza.
M *** e2020-07-12
Lokhu kwaba ukwengeza okuhlanzekile ekhishini! Kwakuyingxenye yesithathu yentengo njengesinye esivela esitolo esithuthukisa ikhaya futhi kwakulula ukufaka! Ngakufaka kimi ehoreni, eziqongweni. Nakanjani ncoma ngoba ifike nezinketho eziningi zomgodi wokucwila. Ngathenga amapulagi eminye izimbobo isinki yami ebinayo kusuka kokunamathiselwe kwangaphambilini kwesifutho ukuze ngiqiniseke ukuthi awekho amanzi azongena lapho noma ngaphansi kwepuleti elisha elihlanganisa izimbobo zakudala zokubamba ompompi. Amapayipi abhalwe ngokusobala ukuthi ayashisa futhi ayabanda, futhi ungawafaka cishe nangamathuluzi. Ngisebenzise isikrufu esishintshashintshayo ukuze nje ngithukulule okunamathiselwe kusinki okudala futhi ngiqinise okusha ukuze kungathinteki nhlobo. Benginenkinga eyodwa kuphela enesisindo se-under-the-sink njengoba ibamba epayipini lokuphuma, kepha ngimane ngigijimise ikhanda lephepha futhi ngokuvamile liwela kalula. Bekufanele nje ngisethe isisindo siphakame kancane kunokujwayelekile, okwenza ukufinyelela kube kufushane, kepha ngiyathanda ukuthi kushintshwe kalula kanjani. Sekukonke ukufakwa okuhle kusinki, kuvuselela ubuciko futhi ekugcineni kuphakeme ngokwanele ukusula amabhodwe amakhulu ngaphandle kokujikisa. Ngisebenzisa futhi isici sepayipi ukunisela izitshalo engadini yami yemifino efasiteleni, okwenza kube lula ukusika amakhambi ngenkathi ngipheka.
Ngenxa yentengo ephansi, bengingabaza le WOWOW. Ngamangala kamnandi. Kusukela ekufakweni, lokhu kungenzeka kube lula ukufaka umpompi engake ngawufaka. Inathi yokuqinisa i-WOWOW kusinki ingaqiniswa ngesandla, lokhu kusho ukuthi akukho ukuzama ukusebenzisa isikrufu esikhaleni esixakile. I-WOWOW ibukeka iyinhle, isiphetho sensimbi esenziwe ngamabhulashi siyisikhathi samanje futhi siyajabulisa. Ukusebenza kwale ompompi kuyamangalisa. Ikhanda le-sprayer lisebenza kahle kakhulu, Kunobude obuningi ku-hose. Inani elihle kakhulu lepompo elihlaba umxhwele kakhulu
Ngakho-ke ngifakelwe le ompompi ekhaya lami kusukela ngomashi ka-2019. Ngangizitshela ukuthi angisoze ngasebenzisa noma yiziphi izimpushana zokuhlanza ezishaqisayo noma amaphedi aklwebhekayo ukuyihlanza. Lokho sekukhokhele abakutholayo… Le nto ibukeka imnandi njengalapho siyifaka. Ukucaca, angihlanganise lutho nalo mkhiqizi noma umthengisi wale mpompi. Angitholanga mali noma izaphulelo zalokhu kubuyekezwa… Mina nje… Bekuhlanganiswe kahle kakhulu, kulula ukwenza iter ngokwakho ukuyifaka futhi kusebenze ngokungenaphutha sonke isikhathi. Akukho ukuvuza, akukho zinkinga. Uma ufuna ompompi obukeka kahle obonakala uphezulu kepha unenani elishibhile, lena ingane yakho. Sikufisela inhlanhla. Siyajabula ukuphendula noma imiphi imibuzo…
Kufakwe le ompompi, futhi kufanele isho ukuthi kuyinto enhle. Isebenza kahle kakhulu, icwebezela kancane kunompompi wombhalo wegama langaphambilini. Inhloko yesifutho isebenza kahle - yonke imisebenzi -, idokodo kahle. Ukuphatha / ukulawula kulula ukuhambisa, okwenza ukulungiswa kwengcindezi yamanzi kube lula. Ngikuthengele lokhu ekhishini lesibili, kepha cabanga ukuthi ngizothenga enye yokulungiswa kabusha kwekhishi lethu. Kubi kakhulu ukuthi akufiki nokuhambisa insipho efanayo. Kube khona ukungapheleli kokuqeda okuncane, okungukuthi, okunye kokuqeda “okuxubiwe” bekungahambelani, noma kubukeka sengathi kushaye isondo lokuxubha kwentambo ukuthinta futhi ulayini webhulashi awuhambelani kahle. Kepha inani elikhulu, futhi kumnandi kakhulu ukusebenzisa kunompompi omkhulu wegama / wemali odlule.
Umpompi wami wasekhishini uyeke ukusebenza ngakho bengilokhu ngifuna ipayipi elizongena esikhundleni salo. Imikhiqizo edumile ibiza kakhulu, ngaphezulu kwe- $ 100 yesitayela esifanayo. Ngangijabule lapho ngithola le ompompi kuWOWOW ku-Amazon cishe ngama- $ 70. Bengingaqiniseki ukuthi ngabe iyipompi enhle noma cha. Ukubuyekezwa kulungile futhi kunewaranti yeminyaka engu-5 ngakho-ke nginqume ukuyizama. Angizange ngiyifake ngokwami ​​ngoba bekufanele ngithole oplamba ukuze ngishintshe izitobhu / ama-valve ngaphansi kosinki. Imiyalo ibonakale sengathi kuzoba lula ukuyilandela. Amapayipi ompompi axhumeka ezitobhini ngakho-ke akudingeki ukuthi usebenzise ukusonta kwesitsha. Umpompi ubukeka umuhle futhi usebenza kahle. Ukuthenga okuhle! Ngingayincoma kakhulu le ompompi kunoma ngubani ofuna ukumiselela noma ukuthuthukisa. Umpompi omuhle!
Ngenza izitsha nsuku zonke futhi le ompompi ibisindise impilo. Akukona nje kuphela okuyigugu lekhishi lami elincane kodwa kuyasebenza futhi. Uma ufana nami uyazizonda izitsha, ngakho-ke noma yini eyenza izitsha zibe lula futhi zisheshe kufanelekile ukuthenga. Ngemuva kokuzifaka ngokwami ​​(bekulula) futhi ngiyisebenzisa nsuku zonke isikhathi esingaphezu kwesonto angikwazi ukuthola iphutha elilodwa. Ibukeka kahle futhi isebenza kahle, isici sokukhipha sinembile futhi sihlehla ngokuphelele ngaso sonke isikhathi, futhi isici sokufafaza siqinile futhi siqhumisa ukudla okudala. Ayikwazi ukuncoma lokhu ngokwanele kunoma ngubani ofuna ukuthuthuka.
Uthenge lokhu njengoba intengo ibiphoqa futhi ukubuyekezwa bekukuhle. Kufakwe namhlanje ekuseni cishe emizuzwini engu-15. Bekungeke kube lula, futhi okuwukuphela kwethuluzi ebengilidinga kwakuwukudonsa okuguquguqukayo It is a ompompi ekhangayo kakhulu. Ukugeleza kwamanzi kungcono kakhulu (ngaphezulu) kuneMoen esiyishintshe. Ikhwalithi kuyo yonke indawo ibonakala iqinile impela. Isibambo sinokumelana okuphelele ukuze ukwazi ukulawula izinga lokushisa nokugeleza kalula. Sizovuselela ukubuyekeza kwami ​​uma kungabambeki kahle ngokuhamba kwesikhathi
Okokuqala, isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu siyakhanga futhi sibonakala senziwe kahle. Isikhathi kuphela esizotshela ukuthi sihlala isikhathi eside kangakanani, kepha ngenani lentengo, inzuzo ishesha kakhulu.
Ngokuphathelene nokufaka: Ngibeke amapayipi ompompi bamanzi okushuba abangaba yishumi nambili phezu komsebenzi wami wokuba ngumninikhaya. Idizayini yohlelo lokufaka i-WOWOW mhlawumbe iyona ecace bha, elula kunazo zonke engake ngazisebenzisa. Kusamele ubhekane 'nokuminyana' ngaphansi kosinki (crossover drain, disposal disposions, njll.), Kepha intambo yombhobho uqobo iyisiqeshana sekhekhe. Ividiyo yokufaka yiyo engithengise kulo mkhiqizo uma kuqhathaniswa nomncintiswano.
Ngaphandle kokulinda imiphumela yokuqina kwesikhathi eside, ngincoma kakhulu lokhu ekubukeni kokuqala nasekusebenzeni kalula kokufakwa. Ngikufisela inhlanhla enhle - akekho okujabulelayo ukusebenza ngaphansi kosinki!
Angikwazi ukujabula ngale mpompi entsha. Ngibe nesimo sokufaka esikhohlisayo ngesibali sikakhonkolo esijiyile, kunzima ukufinyelela ekhoneni, kepha kwahamba kalula.
Isitayela silula kepha sinomusa, futhi ikhwalithi iqinile.
Futhi, ngenze iphutha, okwangishiya ngicabanga ukuthi bekungadwebi ngokwanele kwi-heater yamanzi engiyifunayo ukuze ngiqhubeke. Kuvele ukuthi isifudumezi samanzi asikhanyiswanga kahle. Le ompompi manje isebenza kahle nge-heater yethu futhi ixubeka kahle nokushisa nokubanda ngempumelelo, okungazange kusebenze phambilini.
Zimbili izinto ezenzekile ngesikhathi sokuhlangana.
1. Ngathinta abeseka umpompi futhi ngabathola beshesha kakhulu futhi bezimisele ukusiza.
2. Ngixebule ngesibambo sokufafaza, ngicabanga ukuthi ngidinga ukususa ezinye izihlungi ukukhuphula ukuhamba. Ngayilahla. Lapho ngithengela entsha, kwakulula kakhulu futhi kungabizi ngoba le ompompi ijwayelekile.